> Resource > Free > Video Editors Top 5 Best Free mod
Ma waxaad Saciira u qalab tafatirka mod? Waa hagaag, in Zaman this ee isgaarsiinta casriga ah iyo technology online, waxba ma helo waa wax aan macquul aheyn. Si kastaba ha ahaatee, dooro, waa in qalabka video tafatirka kala duwan ee la heli karo iyo waa kuwo ku adag in xukumi oo ka mid ah waa wanaagsan iyo kan xun. Waxaa intaa dheer, waa in aad ka heli qalab, kaas oo u dhigma lahaa shuruudaha aad si hufan, wax soo saarka ah in aad si sax ah la doonayo bixinta. Sidaas, sida in la helo sida qalab ama software? Read this article si aad u hesho tilmaan-cadaalad ah oo aan eex lahayn ee shanta tifaftirayaasha mod. Maqaalka muujinaya doonaa qaababka, waxtar iyo nuqsaan, mid kasta oo ka mid ah qalabka.
Avidemux caan video qalab tafatirka taas oo qiyaastii internet-ka muddo dhowr sannadood ah. Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab video iyo bixisaa sifooyinka wanaagsan iyo fursadaha aan xuduud lahayn in ay bixiyaan in dadka isticmaala ay. Software waxay leedahay saddex qeybood oo socon for Windows, Mac OS iyo Linux.
Hawlaha video tafatirka aasaasiga ah;
Simple si ay u isticmaalaan.
Free Video Dub waa miisaanka yar oo user-friendly qalab video tafatirka. Waxaan t taageertaa tiro ka mid ah qaabab video ay ka mid yihiin AVI, MOV, FLV, mod, MKV, MTS / M2TS oo dheeraad ah. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u xaalkaa kartaa video files si fudud iyadoo la tirtiro off qaybaha aan la rabin. Qaybta ugu fiican oo ku saabsan qalab tani waa in aanad u baahnayn in ay dib-u-encode wax, kaas oo xajiya, oo tayo leh asalka ah ee aad video.
MPEG Streamclip ma aha oo kaliya qalab diinta video awood leh, laakiin sidoo kale la Timaadda badan oo ka mid ah qaababka ugu bixiyaan si waafaqsan dadka isticmaala ku. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan VOB, PS, M2P, mod, VRO, DAT, MOV, DV, AVI, MP4, TS, M2T, MMV iyo in ka badan. Waxaa kaloo ka mid fudud tafatirka Fansaarada, lana siii iyo siiyay hawlaha, taas oo qalab weyn oo loogu sixiddiisa aad videos, gaar ahaan haddii aad mashruuca isticmaalaa video laga helay ilo kala duwan ee ay u baahan yihiin in ay haboon tahay in la gooyo mid ah sameeyo.
Badalo karaa kala duwan oo kale video files;
Miyuu badhan glitched oo dariishado ah.
Cidhiidhyo tirada file aad u 600MB.
Kasta Video Converter waa aalad diinta file caan ah, kaas oo si fudud loogu badalo files mod oo ayan ku jirin in ay qoreysa xamuulka ah fursadaha diinta ka mid video file in kale. Waxa kale oo la calaamadeeyay karaa aalad video tafatir ah, kaas oo shaqayn karo ujeedooyin kala duwan leh sax.
VSDC Free Video Editor waa xoog badan qalab video tafatirka, kaas oo gebi ahaanba bilaash ah oo caan ah. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan oo ay ku jiraan qaabab video mod, AVI, MP4, MKV, Mpg, wmv, 3GP, FLV. Ka sokow hawlaha video tafatirka aad aasaasiga ah, farabadan oo sida diirada noqon kartaa xataa a video xigxiga caadi galay filim tayo pro-baalaha, halka kumanaan video iyo maqal ah saamaynta ku haboon u qaybsamaan afar qaybood oo kaa caawinaya in aad samaynayso video si ay u eegaan iyo dhawaaqu ka badan firfircoon .
Filmora Video Editor waa aalad video tafatir oo awood badan. Waxay leedahay fursado la wada interface iyo isticmaalka-saaxiibtinimo oo ay aqbalin in dadka isticmaala ay: fursadaha ama qaababka ay sahlan tahay in la fahmo iyo interface la fududeeyay bixinta fududaato in hawlgallada ay ku isticmaala. Hadda ka soo dejisan iyo naftaada tijaabiso.